Dowlada FS oo ku dhowaaqday in gobollo kale laga saarayo Al Shabaab – Hareerley News
Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw oo uu wehliyo wasiirka arrimaha gudaha, dib-u-heshiisiinta iyo federaalka, ayaa duleedka magaalada Dhuusamareeb kulan kula qaatay Taliska qaybta 21-aad, guddiga amniga caasimadda Galmudug iyo taliyaasha laamaha amniga oo dhan.
Wasiirka amniga ayaa saraakiisha ciidanka kula dardaarmay ka shaqeeynta qarannimada iyo midnimada si loo xoreeyo deegaannada Galmudug ee Al-Shabaab ay haystaan, loona hubiyo fulinta mashaariicda horumarineed ee ay qaybta ka tahay dhismaha dekadda Hobyo.
Taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 21-aad, Gen. Mascuud Maxamed Warsame oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in isku-dhafkii ciidanka ay sare u qaaday qorshaha sugidda amniga, midnimada, wada-shaqeynta ciidanka ka dhexeysana ay “argagaxisaduna ku abuurtay cabsi iyo welwel joogta ah.”
Gen. Mascuud Maxamed Warsame ayaa bulshada deegaannada Galmudug guud ahaan ka codsaday in ay kala shaqeeyaan adkeynta amniga, iyo xoreynta deegaannada ay weli haystaan Al-Shabaab.
Dagaalka cusub ee dowladda ay kaga dhowaaqday deegaanada Galmudug ayaa imanaya ayadoo weli uu socdo dagaalka gobolka Shabeellaha Hoose looga xoreynayo Al-Shabaab, halkaasi oo ciidamada dowladda ay ka qabsadeen deegaano dhowr ah.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida oo saakay xukun dil ah fulisay
Maxkamada Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay oo Isniin ah waxaa ay xukun dil toogasho ah ku fulisay laba Dhainyaro ahaa oo lagu eedeyay inay ka tirsanayeen Al-Shabaab. Labada Nin ee xukunka dilka ah lagu fuliyay ayaa waxaa lagu kala Magacaabi jiray Canshuur Cismaan Abuukar Cumar (Asad) 23jir ah iyo Max’ed […]
Taliyaha Ciidamada XDS Jenral Odowaa Oo kulan degdeg ah isugu yeeray teliyeyaasha kala duwan ee ciidamada
Taliyaha Ciidamada Soomaaliya, Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage, ayaa waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray taliyeyaasha kala duwan ee talisyadda Ciidamada Qalabka ee difaaca Qaranka. Warar xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in kulamadaasi oo ka dhici doona Muqdisho looga arrin-sanayo sidii loo dardargelin lahaa howlgalada ka socda waddanka ee ka dhanka ah xoogaga Al-Shabaab. Xogta […]
Duufaan halis oo waliba Xoogan Oo ku soo Wajahan Dalka Mareykanka
Duufaantan ayaa loogu magac darey (Dorian) taas Oo ah mid halis Oo Waliba Xoogan kuna soo wajahan oo ku dhufan doonta Dalka Mareykanka Saadaaliyaasha hawada Oo la wadaagey dadka waa dhanka Baraha bulshada kalib ay ka soo qabteen Satalaydka ayaa waxay u muuqatey mid (aad iyo aad halis u ah) Oo waliba bixineysa hilaac midab […]
Ciidamada DFS iyo Al Shabaab Oo Saakey ku Dagaalamey Duleedka Magaalada Jowhar